အနံ့ခံစွမ်းရည် ပါလာမယ့် ခေတ်သစ် စမတ်ဖုန်းများ – DigitalTimes.com.mm
စမတ်ဖုန်းများမှာ အနံ့ခံနိုင်တဲ့ စွမ်းရ့ည်ပါလာရင် ဘာတွေ အကျိုးရှိသွားမလဲ? ဒီလို စွမ်းရည်သာ ပါလာရင်တော့ စမတ်ဖုန်းများဟာ ပုပ်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ ငါးများကို ပြောပြပေးနိုင်မှာပါ။ လူတွေ အနံ့မခံချင်လောက်အောင် ဆိုးရွားတဲ့ အနံ့အသက်များ၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ အနံ့အသက်များကို လူတွေ ကိုယ်စား အာရုံခံ ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ နည်းပညာကို ဂျာမနီမှ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) က တီထွင်နေပါတယ်။ ပညာရှင်များက လူတွေထက် အနံ့ခံစွမ်းရည် ကောင်းမွန်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် နှာခေါင်းကို Smelldect စီမံကိန်းဖြင့် ဖန်တီးနေပါတယ်။ ပညာရှင် အဖွဲ့မှ Dr. Martin Sommer က လူ့နှာခေါင်းရဲ့ စွမ်းရည်များ ပါတဲ့ အီလက်ထရောနစ် နှာခေါင်းကို ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
လူ့နှာခေါင်းမှာ အနံ့ခံ ဆဲလ်ပေါင်း ၁၀ သန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဆဲလ်များဟာ မတူညီတဲ့ အနံ့များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး လူ့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို သတင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Sommer က သူ့ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် နှာခေါင်းမှ Nanofibers များဟာ အနံ့များကို ခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် နှာခေါင်းဟာ အရွယ်အစား အားဖြင့် စင်တီမီတာ အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး လိုအပ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ပါပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နည်းပညာက အနံ့တစ်မျိုးအတွက် သီးခြား Pattern တစ်ခုကို Chip အား သင်ပေးထားလိုက်တာနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Chip က စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အဲဒီ အနံ့ကို ခွဲခြား နိုင်ပါတယ်။
ပညာရှင်များက သူတို့ရဲ့ နည်းပညာဟာ မီးခိုးများ၊ မီးလောင်မှုများကို သတိပေးခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို အာရုံခံပေးခြင်း၊ ဈေးဝယ်ရာမှာ လတ်ဆတ်တဲ့ အသား၊ ငါးများကို ရွေးချယ်ပေးခြင်းများလို အလုပ်များကို ပြုလုပ်လာနိုင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အနံ့ခံစှမျးရညျ ပါလာမယျ့ ခတျေသဈ စမတျဖုနျးမြား
စမတျဖုနျးမြားမှာ အနံ့ခံနိုငျတဲ့ စှမျးရ့ညျပါလာရငျ ဘာတှေ အကြိုးရှိသှားမလဲ? ဒီလို စှမျးရညျသာ ပါလာရငျတော့ စမတျဖုနျးမြားဟာ ပုပျနတေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ အသား၊ ငါးမြားကို ပွောပွပေးနိုငျမှာပါ။ လူတှေ အနံ့မခံခငျြလောကျအောငျ ဆိုးရှားတဲ့ အနံ့အသကျမြား၊ အဆိပျအတောကျ ဖွဈစတေဲ့ အနံ့အသကျမြားကို လူတှေ ကိုယျစား အာရုံခံ ပွောပွပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ နညျးပညာကို ဂြာမနီမှ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) က တီထှငျနပေါတယျ။ ပညာရှငျမြားက လူတှထေကျ အနံ့ခံစှမျးရညျ ကောငျးမှနျတဲ့ အီလကျထရောနဈ နှာခေါငျးကို Smelldect စီမံကိနျးဖွငျ့ ဖနျတီးနပေါတယျ။ ပညာရှငျ အဖှဲ့မှ Dr. Martin Sommer က လူ့နှာခေါငျးရဲ့ စှမျးရညျမြား ပါတဲ့ အီလကျထရောနဈ နှာခေါငျးကို ဖနျတီးဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။
လူ့နှာခေါငျးမှာ အနံ့ခံ ဆဲလျပေါငျး ၁၀ သနျးဝနျးကငျြရှိပါတယျ။ အဲဒီ ဆဲလျမြားဟာ မတူညီတဲ့ အနံ့မြားကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျပွီး လူ့ရဲ့ ဦးနှောကျကို သတငျးပေးနိုငျပါတယျ။ Sommer က သူ့ရဲ့ အီလကျထရောနဈ နှာခေါငျးမှ Nanofibers မြားဟာ အနံ့မြားကို ခှဲခွားနိုငျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အီလကျထရောနဈ နှာခေါငျးဟာ အရှယျအစား အားဖွငျ့ စငျတီမီတာ အနညျးငယျသာ ရှိပွီး လိုအပျတဲ့ အီလကျထရောနဈ အစိတျအပိုငျးမြား ပါပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ နညျးပညာက အနံ့တဈမြိုးအတှကျ သီးခွား Pattern တဈခုကို Chip အား သငျပေးထားလိုကျတာနဲ့ နောကျပိုငျးမှာ Chip က စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးမှာပဲ အဲဒီ အနံ့ကို ခှဲခွား နိုငျပါတယျ။
ပညာရှငျမြားက သူတို့ရဲ့ နညျးပညာဟာ မီးခိုးမြား၊ မီးလောငျမှုမြားကို သတိပေးခွငျး၊ လထေုညဈညမျးမှုကို အာရုံခံပေးခွငျး၊ ဈေးဝယျရာမှာ လတျဆတျတဲ့ အသား၊ ငါးမြားကို ရှေးခယျြပေးခွငျးမြားလို အလုပျမြားကို ပွုလုပျလာနိုငျမယျလို့ ပွောပါတယျ။